Saddex qof oo dheeri ah ayaa u dhintey dhibaatooyin la xiriira COVID-19 oo ku nool agagaarka | KWIT
Gudaha, Iowa waxaa jiray lix dhimasho oo dheeri ah oo la soo sheegey Isniintii iyo 400 xaaladood oo cusub. Taasi waxay guud ahaan gobolka u keentaa in kabadan 12,300 xaaladood oo wanaagsan iyo 271 dhimasho.
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa sheegay inay qaadanayaan taxaddar dheeraad ah kadib markii mid ka mid ah ilaaliyeyaasha madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence uu ka helay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' usbuucii hore. Reynolds wuxuu booqday Aqalka Cad Arbacadii, Pence ka dib wuxuu yimid Iowa laba maalmood kadib.
Reynolds waxay tijaabisay subaxnimadan subaxnimadeeda waxayna sheegtey inay caafimaad qabtahay oo ay dareemeyso wanaag.
Reynolds waxay samayn doonaan "qorshe karantiil oo karantiil ah" oo ay kujirto tijaabooyin maalin kasta iyo hubinta heerkulka, iyo in qaar ka mid ah xubnaha kooxda ka shaqeeyaan guriga.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in 80% dadka qaba fayrasku ay la kulmaan nidaam fudud ama aan lahayn nidaam cudur.
Waxay tiri imtixaanka Iowa wuxuu kusocdaa Sioux City. Goobta imtixaanka waxay ku taalaa kambuyuutarka kuliyada Western Iowa Tech Community College. Waxaa sidoo kale jira tijaabooyin dheeri ah oo lagu sameynayo xarumaha daryeelka muddada-dheer iyo warshadaha wax soo saarka.
Wakiilka doorashada ee Gobolka Woodbury Pat Gill ayaa ku dhawaaqay shan goobood oo codbixinta ah tan koowaad bisha Juun.
Gill wuxuu door bidiyay dadka codeynaya boostada si loo yareeyo suurtagalnimada faafinta COVID-19.
Tirada goobaha codbixinta ayaa la ballaariyay ka dib dacwad uu gudbiyay xildhibaanka hore ee gobolka Rick Bertrand. Bertrand wuxuu ku andacooday codbixinta maqnaanshaha inay doorbidayaan murashaxiinta dimuqraadiga ah. Bertrand waa Republican.
Caadi ahaan waxaa jira 45 goobood oo codbixinta. Shanta goobood waxay ku yaalliin Riverside Elementary, Long Lines Rec Center, Sergeant Bluff-Luton (lou-tin) Dugsi Sare, Xarunta Bulshada ee Moville iyo Oto-to-Ho Hall City.
Gill wuxuu leeyahay in ku dhow 14,000 foomamka cod bixinta maqnaanshaha ayaa la soo celiyey. In ka badan 57,000 oo cod bixiye ayaa ka diiwaan gashan Gobolka Woodbury County. Waraaqaha codbixinta ee maqnaanshaha waxaa la doonayaa 5 p.m. Jimcaha soo socda.
Codbixiyeyaasha waxaa la weydiin doonaa masaafada bulshada markii ay codkooda dhiibanayaan Maalinta Doorashada June 2-deeda.
Iyo, Koonfurta Hills Mall waxay qorsheyneysaa inay dib u furato Arbacada. Si kastaba ha noqotee, maahan dukaamada dhammaantood qorsheynayaan inay furaan. Saacadaha shaqadu waxay noqon doonaan Isniinta ilaa Sabtida laga bilaabo 11ka a.m. illaa 7 p.m. iyo Axadda laga bilaabo duhurkii illaa 6 p.m.
Suuqa ayaa soo saaray tilmaamo loogu talagalay martida; waxaa ka mid ah jahawareer bulsho, afkaaga iyo sankaaga ku dabool maro maro ah oo aadan koox u uruurin.
Suuqa ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu sameeyo nadiifin ballaaran iyo jeermis-dilis dhowr jeer maalintii.